Speed-up XP and other - MYSTERY ZILLION
Speed-up XP and other
June 2008 edited June 2008 in Windows XP
Window XP မှာ စက်မြန်လာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေတွေ ရထားတယ် လိုက်လုပ်ကြည့်မလား
ကျွန်တော် အခုဆက်ရေးသွားမယ့်ဟာကို တစ်ဆင့်ချင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ မျဉ်းပိတ်ထားရင် နည်းလမ်းတစ်ခုပြီးသွားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း သိသွားပါလိမ့်မယ်။
1. Start / Run ကိုသွားပါ။ Prefetch လို့ ရိုက်ပါ။
2. Prefetch folder ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ folder ထဲက ရှိသမျှ file အားလုံးကို All Select လုပ်ပြီး ဖျက်ပါ။
1. Start / Run ကိုသွားပါ။ Regedit လို့ရိုက်ပါ။
2. HKEY_CURRENT_USER ကိုသွားပါ Control Panel ထဲက Desktop ကိုထပ်သွားပါ။
3. ညာဘက် အကွက်ထဲက MenuShowDelay ကိုဖွင့်ပြီး Value data 400 ကို0ပြောင်းလိုက်ပါ။
1. Start / Run ကိုသွားပါ။ msconfig လို့ရိုက်ပါ။
2. Startup ကိုသွားပါ။ ( Startup ဆိုတာ Window စတက်တက်ချင်း Run လာမယ့် Program လေးတွေရှိတယ် ။ ဥပမာ Cyber Cafe ကစက်တွေဆိုရင် Window စတက်ရင် အရမ်းကြာတယ် ။ Pfingo တို့ Gtalk တို့ QQ ..Vzo စသည်ဖြင့် loading ပိုင်းတွေတက်လာတယ် ။ အဲဒါတွေ အကုန်လုံးက Startup ထဲမှာရှိတယ်။ အခုပြောမှာက အဲဒီ loading ပိုင်းလျှော့ချဖို့အတွက် Startup ထဲမှာ click လေးတွေဖြုတ်ရမယ် ။ System ပိုင်း Run တာတွေလည်းရှိလို့ သတိထား ဖျက်စေချင်ပါတယ်) စက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သွင်းထားတဲ့ software ပေါ်လိုက်ပြီး ဖျက်ရပါမယ် ။ gtalk ကိုဖျက်ချင်ရင် googletalk ဆိုတာလေးကို click ဖြုတ်ခဲ့ ..အဲလိုမျိုး စက်စတက်တုန်း မပေါ်လာစေချင်တဲ့ ဟာတွေကို click လိုက်ဖြုတ်ပါ။ ပြီးရင် OK နှိပ်ပါ။ Exit Without Restarting နဲ့ထွက်ပါ ။
Graphic တွေလျှော့ချတာလည်း မြန်လာစေနိုင်ပါတယ်
1. Start / Control Panel ထဲက System ကိုသွားပါ။
2. System/ Advanced ထဲက Performance Settings ကိုသွားပါ။
3. Adjust for best performance ကို Click (ရွေးပြီး) OK နှိပ်ပါ။ ခဏစောင့်ပါ။
Internet Connection ကို 100Mbps ထိတိုးပါမယ်
1. Start / Run ကိုသွားပါ။ System.ini လို့ရိုက်ပါ။
2. အောက်က code တွေကို တစ်ကြောင်းထဲအနေနဲ့ ထပ်ပေါင်းထည့်ပါ (System.iniတွင်)
page buffer=100000kbps load=100000kbps Download=100000kbps save=100000kbps back=100000kbs
System.ini ကို အခုလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ။
3. File / Save ( Ctrl + S) လုပ်ပါ။
ကဲ အားလုံးပြီးသွားပါပြီ Restart ချပါ။
ရှိသေးတယ် .. virtual memory မြှင့်တာတို့ ဘာတို့က အိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့ ဟဲ:D:D ကျွန်တော်ကတော့ vista မသုံးသေးဘူး အိမ်မှာလဲ XP ဘဲ နောက်ပိုင်း အကုန်လုံးသုံးပြီ ဆိုတော့မှ လိုက်သုံးတော့မယ်
johnko wrote: »
ကျွန်တော် အခုဆက်ရေးသွားမယ့်ဟာကို တစ်ဆင့်ချင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ မျဉ်းပိတ်ထားရင် နည်းလမ်းတစ်ခုပြီးသွားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်း သိသွားပါလိမ့်မယ်။virtual memory မြှင့်တာတို့ ဘာတို့က အိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့ ဟဲ:D:D
ကျွန်တော်ကတော့ vista မသုံးသေးဘူး အိမ်မှာလဲ XP ဘဲ နောက်ပိုင်း အကုန်လုံးသုံးပြီ သုံးကြတော့ဆိုမှ ကိုယ်လည်း မိုးခါးရေလိုက်သောက်တော့မယ် :D:D ဒါနဲ့ ဗစ်တာသုံးရတာ ခါးလားဟင် :1::1:
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အကျိုး၊အပြစ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ေ၀ဖန် ရေးသားပေးစေလို့ပါတယ်...
ဒါမှလဲ အားလုံးက သိပြီး လိုက်လုပ်နိုင်တာပေါ့၊
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကို iceos ခင်ဗျား ။။ အကျိုးအပြစ်တွေကတော့ ကျွန်တော်လည်း Details တော့ မသိဘူး :D ကျွန်တော့်စက်ကတော့မြန်လာလို့ :67::67: အဲဒါ မျှလိုက်တာပါ ။ သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပေးပါနော် ။ အမှန်က ကို iceos အကြံပြုသလို အကျိုးအပြစ်တွေပါရေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ် \_:D/\_:D/\_:D/
ဗျို့ကို johnko ...ဒါက xp အတွက်ပေါ ့:39: vista အတွက်မြန်အောင်လုပ်တဲ ့နည်းကောမရှိဘူးလားဗျ...ရှိရင်မစပါအုံး:101:
ko-edit wrote: »
ဟီး :D Vista က စမ်းကိုမစမ်းကြည့်ရသေးတာ ကိုအက်ဒစ်ရ ရှာထားတာတွေ့ရင်တော့ တင်ထားပါ့မယ် ။